Waa tuma Halimah Yacob? Gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka Singapore ? – Xeernews24
Waa tuma Halimah Yacob? Gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka Singapore ?
13. September 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/halimah.jpg 169 298 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-13 23:39:282017-09-13 23:39:28Waa tuma Halimah Yacob? Gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka Singapore ?
32 qof oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Ethiopia (Yaa ka dambeeyey?) Shirkada Apple Oo Soo Saaraytay Taleefoonkii Ugu Casrisanaa Abid+Sawirro.